ကလေးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်အကြားလိင်ရန်လိုသည့်အပြုအမူ၏ X-rated ပစ္စည်းများနှင့်ကျူးလွန်: link တစ်ခုရှိပါသလော (2011) - Porn တွင်သင့်ဦးနှောက်
မှတ်ချက်များ။ ။ မှယူသည်။ ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းအပေါ်အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများ၏သက်ရောက်မှု: အသုတေသနတစ်ဦးကပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း:
ဒေတာကို 36 လအတွင်းတစ်ထွာကျော်စုဆောင်းသုံးလှိုင်းတံပိုးအတွက်စုဆောင်းခဲ့ကြသည်။ဒီလေ့လာမှုကရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိအကြမ်းဖက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းထိတွေ့နေသောဆယ်ကျော်သက်ထိတွေ့မခံခဲ့ရတဲ့သူတွေကိုထက်လိင်ရန်လိုဖြစ်ခြောက်ကြိမ်ပိုပြီးဖြစ်ကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ ဆနျ့ကငျြ, အကြမ်းမဖက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းထိတွေ့နေသောဆယ်ကျော်သက် (စ။ 14) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်း "ကစာရင်းအင်းအကြမ်းမဖက်မရှိစားသုံးမှုသတင်းပို့သောသူတို့အားနှိုင်းယှဉ်လိင်ရန်လိုသည့်အပြုအမူအစီရင်ခံရန်ညီတူညီမျှများပါတယ်" ။
ကျူးကျော်ပြုမူနေ။ 2011 Jan-Feb;37(1):1-18.
Ybarra ML, Mitchell က KJ, ဟမ်ဘာဂါ M က, Diener အဘိဓါန် West M က, အရွက် PJ.
ကလေးများ, Santa Ana ကယ်လီဖိုးနီးယား 92705, အမေရိကန်နိုင်ငံများအတွက်အင်တာနက်ကိုဖြေရှင်းနည်း။ [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]
X-rated ပစ္စည်းမှရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိထိတွေ့မှုနှင့်လိင်ရန်လိုသည့်အပြုအမူများအကြား longitudinal ချိတ်ဆက်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာစစ်တမ်းကောက်ယူလူငယ် 10-15 တစ်နှစ်ကြားရှိအကြားလေ့လာခဲ့ကြသည်။
1 အတွက် Wave ကို 2006 မှာပါဝင်သူ (ဎ = 1,588) ရှေ့ 12 လအတွင်းကဤထိတွေ့မှုနှင့်ရလဒ်နှင့် ပတ်သက်. မေးမြန်းခဲ့ကြသည်။ Wave ကို2ဒေတာ (ဎ = 1,206) Wave ကို 12 နှင့် Wave ကို 1 data တွေကိုပြီးနောက်3လအတွင်းခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်ကောက်ယူ (ဎ = 1,159) Wave ကို 24 ပြီးနောက်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 1 လအတွင်းစုဆောင်းကြ၏။
ထို့ကြောင့်, ဤစီမံကိန်းအတွက်ဒေတာတစ်ဦး 36 လအချိန်ဘောင်ကိုကိုယ်စားပြုသည်။ generalized ခန့်မှန်းချက်ညီမျှခြင်းနှင့်အတူတစ်ဦးကမဖြစ်စလောက်မော်ဒယ်တစ်ချိန်တည်းကျော်က x-rated ပစ္စည်းထိတွေ့တဲ့ function ကိုအဖြစ် 36 လအတွင်းလိင်ရန်လိုသည့်အပြုအမူ၏လူဦးရေ-ပျှမ်းမျှအလေးသာကိုယ်စားပြုရန်နှင့်အချိန်နှင့်အမျှလူတစ်အတွင်းဒေတာအတွက် Cluster များအတွက်အကောင့်ဖို့အသုံးပြုခဲ့သည် ။
လူငယ်၏ 5% ပျမ်းမျှလိင်ရန်လိုသည့်အပြုအမူ perpetrating ဖော်ပြခဲ့သည်နှင့်လူငယ်များ၏ 23% က x-rated ပစ္စည်းမှရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိထိတွေ့မှုကဖော်ပြခဲ့သည်။ သည်အခြားအလားအလာသြဇာ Proximity (ဆိုလိုသည်မှာ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်သားကောင်) နှင့် distal ဝိသေသလက္ခဏာများ (ဥပမာ, ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်း) အတွက်ချိန်ညှိပြီးနောက်ကျနော်တို့အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှအကြမ်းဖက် X-rated ပစ္စည်းမှရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိထိတွေ့ကိုယ်ပိုင်များ၏အလေးသာရှိနီးပါး 6-ခြံတိုးခန့်မှန်းကြောင်းတွေ့ရှိရ အစီရင်ခံလိင်ရန်လိုသည့်အပြုအမူ (aOR: 5.8, 95% CI: 3.2, 10.5), အကြမ်းမဖက်က x-rated ပစ္စည်းထိတွေ့ခြင်းသော်လည်းကစာရင်းအင်းသိသိသာသာဆက်စပ်မဟုတ်ခဲ့ (aOR: 1.7, 95% CI: 0.94, 2.9) ။
အသင်းအဖွဲ့များယောက်ျားလေးများနှင့်မိန်းကလေးများအဘို့အဆင်တူခဲ့ကြသည် (ယောက်ျားလေးများအကြမ်းမဖက်က x-rated ပစ္စည်း aOR = 2.0, 95% CI: 0.8, 4.7; အကြမ်းဖက် X-rated ပစ္စည်း aOR = 6.5, 95% CI: 2.7, 15.3; မိန်းကလေးများအကြမ်းမဖက်က x-rated ပစ္စည်း aOR = 1.2, 95% CI: 0.5, 3.2; ခရမ်းရောင်က x-rated ပစ္စည်း aOR = 6.1, 95% CI: 2.5, 14.8) ။